संसदमा राजेन्द्र महतो : ‘नक्सामा मात्रै होईन भूमि नै फिर्ता ल्याउनुहोस, हाम्रो साथ छ’ - Terai Nepal
२०७७ जेष्ठ ३१ गते, शनिबार १५:४५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ३१ जेठ । राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले संविधानप्रति आफूहरुको असहमति र असन्तुष्टि हुँदाहुँदै नेपाली भूमिको सवाल र राष्ट्रियताको सवाल आउँदा सहर्ष स्वीकार गरेको बताएका छन् । शनिबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै नेता महताले यस्तो बताएका हुन् । उनले नक्सामा मात्रै नभएर भूमि नै फिर्ता गर्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागमा समेटिनु सम्पूर्ण नेपालीको लागि खुसीको कुरा भएको बताए । यद्धपी उनले कसको पालामा ? र क कसले राष्ट्रघात गरे ? भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठाए । महतोले पटक-पटक महाकाली सन्धिको कुरा उठाउँदै भने,‘महाकाली सन्धिमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । को राष्ट्रवादी, को हो राष्ट्रघाती त्यसको पहिचान हुनुपर्यो ? मधेसी नागरिकले राष्ट्रियताको सवालमा कति पटक अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने हो ?’ तस्विर तथा भिडियो स्रोत : संघीय संसद सचिवालय